Ndị nrụpụta Obere Flags Series - China Mini Flags Series Suppliers & Factory
Ọkọlọtọ osimiri Obere Tabletop dị fechaa, ọ dị mfe iji ya, ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị. Zuru oke maka mgbasa ozi countertop ma ọ bụ tebụl n'ime ụlọ ọgbakọ ma ọ bụ na ihe ngosi ahia.
Enwere ike itinye ọkọlọtọ iko mmiri ara n'elu dị larịị dị ka iko/tile/metal. Ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị. Ọ dị mma maka ịzụ ahịa, ụlọ nri, mmemme na ndị ọzọ! Ma ọ bụ akụkụ-mgbanwe, ị nwere ike inwe akụkụ ziri ezi nke ịchọrọ.
Emebere ọkọlọtọ iko mmiri ara ehi siri ike maka ngwa pụrụ iche nke chọrọ ike nri abalị dị ike n'elu ebe dị larịị dị ka iko na windo ụgbọ ala. Ngwá ọrụ dị mma maka mgbasa ozi n'èzí. A na-anwale ya na ọsọ nke ruru 120km / h n'ụgbọ ala na-akpụ akpụ.
Ọkọlọtọ ntọala magnetik bụ nnukwu ihe ngwọta a ga-eji na ụgbọ ala ma ọ bụ shelf ígwè. Ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị. Enwere ihe ndọta dị ike anọ jikọtara na ntọala ya. Ma ọ bụ akụkụ-mgbanwe, ị nwere ike inwe akụkụ ziri ezi nke ịchọrọ.
ọkọlọtọ Clip bụ nhọrọ okike maka nkwalite ma dọta uche n'ime obere oghere. Mwekota rọba dị arọ na-adị arọ nwere ike ịdenye na ọkpọkọ / tube / ngere wdg
Ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị.
Ọkọlọtọ windo ụgbọ ala patent anyị, nke a na-akpọkwa ọkọlọtọ. Ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị. Ngwá ọrụ ngosipụta dị ukwuu maka klọb, ebe a na-ere ụgbọ ala, ihe ngosi n'okporo ámá, iji kwalite akara ma ọ bụ ọrụ wee jide anya ndị ahịa n'ọdịnihu ozugbo.
Ekwuru: maka ụgbọ ala kwụ ọtọ dị ka nza ụgbọ ala ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala n'okpuru 35mph